घर » फास्टनर स्क्रू » निकल २०१० भारी हेक्स बोल्ट अनस नम्बर २२०.40०61१
तिमीले हामीलाई किन छान्नु पर्छ?
हामी १ 15 बर्षदेखि फास्टनरमा संलग्न छौं। हाम्रो कम्पनीको अमेरिकी, युरोप र अस्ट्रेलिया आदिका ग्राहकहरूसँग राम्रो प्रतिष्ठा थियो। हामीसँग बिक्री र गुणस्तर नियन्त्रणको लागि राम्रो टोली पनि छ।
हामी तपाईंलाई २ within घण्टा भित्र प्रतिक्रिया दिनेछौं। हामी तपाईंको रेखाचित्रको अनुसार नानस्टर्डर्ड उत्पादन गर्न सक्दछौं। र हामी बिक्री पछि तपाईंको सेवा जारी राख्नेछौं र हामीबाट गल्तीहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछौं।
हाम्रो उत्पादन को मूल्यहरु उचित छ! मूल्यहरु धेरै राम्रो हुनेछ यदि तपाइँको मात्रा राम्रो छ।
हामीसँग डेलिभरी उत्पादन गर्न कडा गुण नियन्त्रण छ। हाम्रो कम्पनीसँग कडा टेक्नोलोजी समर्थन छ, हाम्रा colleagues०% सहकर्मीहरू मास्टर वा स्नातक डिग्री छन्। हामीले प्रबन्धकहरूको समूह खेती गरेका छौं जुन उत्पादनको गुणस्तरसँग परिचित छन्, व्यवस्थापनको आधुनिक अवधारणामा राम्रो छ।
१. कुनै पनि समय तपाईले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
२. OEM, क्रेता डिजाइन, क्रेता लेबल सेवाहरू।
E. विशिष्ट र अद्वितीय समाधान हाम्रो राम्रो तालिम प्राप्त र पेशेवर ईन्जिनियरहरू र कर्मचारीहरू द्वारा हाम्रो ग्राहकलाई प्रदान गर्न सकिन्छ।
W. हामी तपाईंको जाँचको लागि नि: शुल्क नमूना प्रदान गर्न सक्छौं।
S. विशेष छुट र बिक्री वितरकको संरक्षण हाम्रो वितरकलाई प्रदान गरियो।
T. समयमै वितरण
P. प्याकिंगले ग्राहकको ब्रान्ड बनाउन सक्छ।
8. राम्रो बिक्री पछि सेवा।
हामी धनी अनुभवको साथ एक पेशेवर फास्टनर निर्माता हो। र तपाइँको कम्पनी संग राम्रो व्यापार गर्न को लागी, हामी एक शाखा स्थापना गर्नुभयो विदेशी व्यापार क्षेत्रहरु खोल्न को लागी।
२. के तपाई नि: शुल्क नमूनाहरु प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
You. के तपाईं उत्पादन वा बक्सहरूमा हाम्रो डिजाइन स्वीकार गर्नुहुन्छ?
हो। हामी अनुकूलित डिजाइन स्वीकार गर्दछौं र हामीसँग एक पेशेवर डिजाइन टीम छ जुन तपाइँको आवश्यकताको आधारमा उत्पादनहरू डिजाइन गर्न सक्दछ।
Your. तपाईंको वितरण समय कति हो?
सामान्यतया 7-10 दिन यदि सामानहरू स्टकमा छन् वा १-30- stock० दिनहरू स्टकमा छैनन्। एक शब्दमा, अर्डर मात्रा अनुसार।